သီးစုံ ဂျယ်လီ ပူတင်း | Wutyee Food House
သီးစုံ ဂျယ်လီ ပူတင်း (၈ယောက်စာ)
မမရေ ပူတင်းခွက်လေးတွေကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဟင် 🙂
Juntion 8 City Martမှာ ၀ယ်လို့ရတယ် sis.. 🙂
ဒါဘယ်နှစ်ခွက်စာလောက်ရတဲ့ အချိုးအစားလဲ သိပါရစေ
လှလိုက်တဲ့ သီးစုံဂျယ်လီပူတင်းလေးပါလား ဝတ်ရည်ရေ။ တော်လိုက်တာ။ အရောင်လေးကလည်း လှမှလှ။ 🙂
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်နော် sis အရမ်းစားကောင်းတယ်
mike tal… sar chin lar pe 🙂
ကိုယ်ဆိုကြိုက်မှာ သေချာတယ်.. 🙂
သားအတွက်လုပ်ပေးဦးမယ်…Thanks wit yi 🙂
ဟုတ်ကဲ့ မ။ သားလေးကြိုက်မှာ သေချာတယ်.. 🙂
မ၀တ်ရည်ရေ ပူတင်းလုပ်နည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လုပ်စားဖြစ်အောင်လုပ်စားမှာပါ။နွားနို့ အချိုးအစားကို
နွားနို့ (Full Cream Milk) – ၁ခွက်ခွဲ (၃၅၀ မီလီလီတာ)။ ပုံမှန် ရေသန့်ဗူး တစ်ဘူး ၁၀၀၀မီလီလီတာ ရှိပါတယ်။ ရေသန့်ဗူး တ၀က်က ၅၀၀ မီလီလီတာပါ။ အဲဒီလို နွားနို့ အချိုးအစားကို တိုင်းလို့ရပါတယ်.. လုပ်စားနော် ညီမ
Agar ဂျယ်လီ အချောင်း ကဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါလဲ
City Mart မှာဝယ်လို့ရတယ် sis
I am looking for your books since I heard it was on market. Could you tell me which book store can I buy.
ဟုတ်ကဲ့ စာပေလောကနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကြီး တော်တော်များများမှာ ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အားပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်
kay thwe win says:
ဟုတ်တယ် ညီမ။ အိမ်မှာ အချိုပွဲလေး လုပ်စားလို့ရတယ်။ ပြီတော့ အရမ်းလည်း စားလို့ကောင်းတယ်
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော် ညီမ..
Soe Pye says:
လုပ် စား ဖို့ရန် ကုန် ကို မှာရ အုန်း မယ်။
ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံခြားမှာ ပိုရှာရလွယ်မယ် ထင်တယ်…
ဒီနေ့ပူတင်းလုပ်စားတယ်…စားလို့ ကောင်းတယ်..သမီးလေးလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်….ပို့ စ် တင်ပေးတဲ့ မ၀တ်ရည် ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…ကောင်းတာလေးတွေလည်း ထပ်ပြီးတင်ပေးပါဦးနော်…
ဟုက်ကဲ့၊ သမီးလေး ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကြိုးစားပြီ မုန့်လုပ်နည်းတွေ တင်ပေးပါအုန်းမယ်..
၀တ်ရည်ရေ ပူတင်းလုပ်တဲ့ခွက်လေးတွေကဘယ်မှာဝယ်လို့ ရမှာလဲသိချင်လို့ ပါ။အဆင်ပြေရင်ဖြေပေးပါနော်။City mark မှာဗီနီကာအရည်နဲ့ apple green က၀ယ်လို့ မရဘူး။သွားဝယ်တာမရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဝယ်လို့ ရတဲ့နေရာကိုပြောပေးပါအုံးနော်။
ဟုတ်လား။ City Mart ကသူတွေ မသိတာ ဖြစ်မယ်။ အမှန် ဗီနီကာ၊ green အစိမ်းရောင် အရည်ရော ၀ယ်လို့ရတယ်။ ဂျုံမှုန့်တွေ ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာ။ သူတို့ကို မေးတာထက် ကိုယ်ဘာသာ ရှာကြည့်ရင် တွေ့ဖို့ပိုများမယ်။ ပူတင်းလုပ်တဲ့ခွက်တွေက ၀တ်ရည် Junction 8 City Mart က၀ယ်လာတာပါ။ ဈေးလည်း သက်သာတယ်၊ ဘယ်လောက်မှ မပေးရဘူး.. 🙂
ဟုတ်တယ် အစ်မရေ City Mart မော်တင်တာဝါမှာ ရှာတာ ဗီနီကာ/apple green ကော မရှိဘူး
Branch တိုင်းမှာ မရှိဘူးနဲ့တူတယ် 🙁
ဟုတ်လား။ sis.. ၀တ်ရည် အသွားများတာကတော့ Market Place, Junction 8 City Mart မှာတော့ ရှိတယ်..
အမကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..apple greenက၀ယ်လို့ ရပြီး vanilla က၀ယ်လို့ မရခဲ့ဘူး..
Vanilla အရသာနဲ့ အနံ့လေး ရအောင် ထည့်တာပါ။ မပါလည်း လုပ်စားလို့ရပါတယ်.. 🙂
ဟုတ်။ စားလို့ အ၇မ်းကောင်းတယ်၊ လုပ်စားကြည့်နော် ညီမ
အစ်မ Agar ဂျယ်လီအချောင်း အစား ဂျယ်လီအမှုန့်ကိုသုံးလို့ရလားဟင်..
ဘယ်လောက်ထည့်၇မလဲဟင်..သင်း ဆီမှာ ဂျယ်လီအချောင်း ရှာလို့မတွေ့လို့ပါနော်..
Agar ဂျယ်လီ အမှုန့်ထုပ် တ၀က်ဆိုရင် ရပါပြီ
You are welcome par sis!
may phyo thaw says:
ုkay thwe win says:
ပူတင်းလုပ်လျှင် နွားနို့ကို အရင်ကျိုဖို့ လိုလား သိချင်ပါတယ် အစ်မ
စက္ကူဘူးနဲ့ နွားနို့ဆိုရင် ကျိုဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျိုထားတဲ့ နွားနို့ဆိုရင် အအေးခံပြီမှ ပူတင်းလုပ်ပါ။
apple greenအစား တခြားဖျော်ရည်တခုခုထည့်လို့ရလားsis
Apple green အစား တခြား အစိမ်းရောင် အရည် ထည့်လို့ရပါတယ်..
အမရေ ပူတင်းလုပ်တာ မရဘူး ရေတွေဘဲ ကျန်နေတယ် ၃ ခါ ၇ှိပြီ )း )း )း
ပူတင်းပေါင်းတဲ့အခါ အောက်ရေများပြီ ခွက်ထဲ ၀င်ကုန်တာဖြစ်မယ်။ ရေနည်းနည်းလျှော့ထည့်ပြီ ပူတင်းခွက်ထည့်ပြီ ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါ sis
Po Moe says:
Thank you very much, Wut yee.
ညီမရေ သီးစုံဂျယ်လီပူတင်းကို ပန်ကန်ပြားမှာ မှောက်ချလိုက်တာ ညီမလို လှလှလေးမရဘူး
ပူတင်းတွေက အိကျပြီးပုံပျက်သွားတယ် အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် အမကလောဘကြီးတော့ ဖန်ပန်ကန်
sis ရေ ဂျယ်လီပူတင်းက ပန်းကန်ပြားမှာ မှောက်ချစရာမလိုဘူး။ ဖန်ခွက်ထဲက အတိုင်းပဲ စားရုံပဲ.. 🙂
မဝတ်ရည် သရဖီကမွေးနေမှာသူငယ်ချင်းတွေကို အဲလိုလေးလုပ်ကြွေးချင်တာ လူများတော့ဖန်ခွက်အတင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါ အပူခံကော်ခွက်လေးတွေနဲ့လုပ်လိုရလား သိချင်လိုပါ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါနော်
pu lay says:
pu ama ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဖြစ်တယ်သိလား
Hee Thanks also sis 😀
ုူlue ma ayemyatthu
ဂျယ်လီ ပစ်စီးက လမ်းမတော် ၁၀ လမ်း အလယ်ကတရုတ်မုန့် လုပ်ပစ်စီးရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ
မမ ရေ သစ်သီးမျိုးစုံ ဖျော်ရည်လေးများများတင်ပေးပါနော်
ဟုတ် ကျောက်ကျောမှုန့်ကို မကျိုပဲ၊ ရေနွေးနဲ့ပဲ ရောမွှေပြီ ထည့်လို့ရပါတယ်။ 🙂
ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်. 🙂
အစ်မရေ ညီမဆီမှာ အဂါဂျယ်လီအချောင်းရဖို့ကမလွယ်ဘူး – အဲဒီအစား ဘာထည့်ရင်ကောင်းမလဲ – ညီမက အမေရိကားကပါ – ဒီမှာဆိုဘာဝယ်လို့ပိုအဆင်ပြေမလဲ – အစ်မလုပ်ထားတာလေးကြည့်ပြီး လုပ်စားချင်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Agar အမှုန့်ထုပ်ရှိရင်လည်း ထည့်လို့ရပါတယ်။ အမေရိကာမှာဆို ဂျယ်လီ အရောင်ပါပြီသား အမှုန့်ထုပ်တွေ ရနိုင်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ပါနော် sis.. 🙂
can i add baking soda while making pudding
Agar အပြာထုပ်နဲ့ရောလုပ်လို့ရလား ခွက်ကတခါသုံးခွက်ရောသုံးလို့ရလား